MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA JIIRKA JIIRKA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Jiirka Jiirka
Toy Rat Terrier puppy with Maggie, a tricolor Toy Rat Terrier and Buffy, a bulug fawn Toy Rat Terrier dhammaantood miisaankoodu waa 5 rodol.
Terrier-ka Jiirka Mareykanka
Jiirka Jiirku waa eey si fiican u muruqsan oo leh laab qoto dheer, garbaha adag, qoorta adag iyo lugaha awoodda badan. Jidhkiisu waa is haysta laakiin hilib leh. Dheguhu way toosnaan karaan ama way jabi karaan waana la qaadi karaa iyagoo kacsan marka eeyga soo jeedo. Waxay ku dhalan kartaa dabo gaaban ama dherer dherer ah, mid kasta waxaa looga tagayaa xaaladdiisa dabiiciga ama waxaa lagu xiraa laba maalmood da'da. Midabada jaakada waxaa ka mid ah luul, sabar, shukulaatooyin, casaan iyo cadaan, seddex-dhibic, casaan adag, madow iyo cagaar, buluug iyo cadaan iyo guduud cas. Kalkaaliyeyaasha ka welwelsan eeyaha shaqeeya ma ahan kuwa buuq badan oo ku saabsan waxyaabaha gaarka ah ee muuqaalka.
Jiirka Jiirku waa eey caqli badan, feejigan oo jecel. Waa mid baaritaan badan oo noole ah. Eygan kalgacalka badan ayaa wehel u ah kuwa ku raaxeysan doona eey firfircoon. Waxay ku fiican yihiin carruurta, gaar ahaan haddii laga soo koriyey iyaga oo ka soo baxay puppy. Iyagu waa, inta badan, saaxiibtinimo shisheeyaha. Jiirka Jiirku waxay sameeyaan ilaalin wanaagsan. Eeyahaani waa kuwo deg deg badan, aad u ciyaar badan mana ahan kuwa wax dhoofiya. Dabeecada eeyahaani waa mid saafi ah. Dabeecadda, feisty, cabsi la'aanta waxaa laga heli karaa nooca ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'terriers'. Waxay jecel yihiin inay ka farxiyaan oo ay ka jawaabaan oo ay u soo qaataan tababarka si ka dhakhso badan eeyaha badankood. Jiirka Jiirku waa eey aad u akhlaaq wanaagsan, oo si fiican u qaabaysan. Way fududahay in la tababaro, aadna u xiiseeyo barashada iyo ka farxinta milkiilaha. Waxay jecel yihiin inay ku raacaan iyo inay sameeyaan waxaad samaynayso. Iyagu sidoo kale waa dad dabbaasha aad u wanaagsan, oo aan bashful ama cabsi lahayn wax dhibaato ahna ku qabin biyaha. Waxay sameeyaan eeyo beeraha wanaagsan iyo sidoo kale eeyo qoys oo aad u fiican oo loogu talagalay xayawaanka iyo wehelnimada. Eygan adag ayaa loo adeegsadaa ugaarsiga safarrada iyo sidoo kale shaqo cabsi leh. Eeyaha waaweyn ayaa si fudud ula qabsan kara qoysaska carruurta leh ama aan lahayn. Hubso inaad tahay eeygan mid adag, kalsooni leh, oo iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga fogaado Cudurka Dog yar , bini-aadamku kiciyay dhibaatooyinka dhaqanka taas oo ay ku jiri karaan arrimaha dhuleed. Had iyo jeer xusuusnow, eeyadu waa harooyin, ee maaha dad . U hubso inaad la kulanto dareenkooda dabiiciga ah sida xayawaanka.
Jiiriga Jiirku wuxuu ku yimaadaa saddex cabbir oo kala duwan.
Heerka: Dhererka 14 - 23 inji (35½ - 58½ cm)
Heerka: Miisaanka 12 - 35 rodol (5½ - 16 kg)
Dhexdhexaad: Dhererka 8 - 14 inji (20 - 35½ cm)
Dhexdhexaad: Miisaanka 6 - 8 rodol (3 - 3½ kg)
Ciyaaraha: Dhererka: 8 inji (20 cm)
Cunto: Culeys: 4 - 6 rodol (2 - 3 kg)
Terrier ratiga madow iyo tan
Jiirka Jiirku caadi ahaan kuma fiicnaandoonaan aqalka dhexdiisa inta ay helayaan ugu yaraan 20-30 daqiiqo oo jimicsi ah maalintii. Iyagu si caddaalad ah ayey gudaha ugu firfircoon yihiin waana inay lahaadaan ugu yaraan daarad yar ama dhexdhexaad ah. Jiirka Jiirtu waxay jecel yihiin wax qodida, waxayna si fudud uga soo bixi karaan deyr ood leh. Haddii ay haystaan ​​ilaalin habboon, waxay awoodaan inay waqti fiican ku qaataan dibadda. Waxay jecel yihiin inay guriga dhexdiisa iyo dibaddaba ku ciyaaraan.
Jiir Jiirku wuxuu u baahan yahay jimicsi fiican. Noocan ayaa loo baahan yahay in la qaato maalin kasta socod dheer ama orod. Waa inay lahaataa ugu yaraan 20-30 daqiiqo maalintii, laakiin wax badan ayey ku raaxeysan doontaa. Noocani wuxuu ku raaxeeyaa ciyaaro adag iyo rooga bannaanka.
Jiiriga Jiirku waa fududahay in la xaliyo. Shanlaab mar mar ah iyo cadayasho si looga saaro timaha dhintay ayaa ah waxa kaliya ee ay u baahan tahay.
Waxaa lagu magacaabay garashada Teddy Roosevelt, Jiirka Jiirka waxaa lagu hormariyay Great Britain asal ahaan ka Cajiib ah Fox Terrier iyo Manchester Terrier 1820. Waxaa la keenay USA 1890s. Waqtigaas dhammaantood waxay ahaayeen midabkoodii asalka ahaa ee madow iyo tan. Magazine Life wuxuu tusay Madaxweyne Roosevelt oo wata sedex madoobaadka madow iyo tan. Kalkaaliyeyaasha Mareykanka ayaa mar kale ka talaabay iyaga oo leh Cajiib ah Fox Terrier sidoo kale Gorgor iyo Xoq . Beagle wuxuu kordhiyay baaxad, dabagal iyo awood ugaarsi, oo ay weheliso midabka cas. Whippet wuxuu ku darsaday xawaaraha iyo kacsanaanta iyo malaha midabada buluuga iyo biriijka. Noocyada ugu yar ayaa laga soo qaatay Cajiib ah Fox Terrier iyo Chihuahua . Jiiriga Jiirku wuxuu cadeeyay inuu yahay midka ugu fiican godadka jiirka. Mid ka mid ah Jiirka Jiir ayaa lagu soo waramayaa in uu ku dilay in ka badan 2,501 jiir muddo u dhexeysa toddobo saacadood oo keliya jiir bakhaar ku yaal. Jiirka Jiirku waa gacan xoog badan oo beeraley ah, oo awood u leh inuu ka takhaluso bakhaarka xayawaanku ku badan yahay ee aan wax dhibaato ah lahayn. Jiirka Jiirku wuxuu si rasmi ah u aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 2013.
NRTR = Diiwaanka Terrier Terrier Territory
RTBA = Ururka Jiirista Jiiriga Jiir
RTCI = Jiir Terrier Club International
Xirmo Rat Terriers, Disney, Freddie, Sir iyo Penny
'Moo Jiirka Jiiriga markuu 6 bilood jir yahay wuxuu jecel yahay inuu boodo oo uu ceyrsado kubadaha rogaya. Magaciisu waa Moo maxaa yeelay dhibcihiisa madow waxay uga dhigayaan inuu u ekaado sac. '
Noel Jiir Terrier madow iyo cadaan faraxsan oo doogga jiifa.
Kani waa Dagwood 2 jir ah. Lahaanshaha sawirka Anne Blair
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan Jiiriga Jiir
Sawirro Jiir Jiir ah 1
Jiirrada Sawirada 2
Sawirada Jiir Terrier 3
Macluumaadka Taranka Noolaha Eeyaha Eeyaha ugaarsiga ah
shar pei black shay mix
feerka iyo isku darka bulldog faransiiska
eeyo yar yar oo bunni iyo tan chihuahua ah